Ungazikhusela njani ekulandeleleni i-iOS 14.5 | IPhone iindaba
Ungazikhusela njani kwii -apps ekulandeleleni nge-iOS 14.5
ULuis Padilla | 27/04/2021 10:00 | iOS 14, Izifundo kunye neencwadana
IOS 14.5 ifikile ukusivumela ukuba sivule i-iPhone yethu enxibe imaski, ngenxa yeApple Watch yethu. Kodwa kwakhona izisa enye into ebalulekileyo kubucala bethu: ukulandelela ukuvimba kwizicelo.
1 I-IDFA kunye nokulandela umkhondo wesicelo
2 IOS 14.5 itshintsha yonke into
I-IDFA kunye nokulandela umkhondo wesicelo
Kuyaziwa kubo bonke ukuba umsebenzi wethu xa usiya kwi-intanethi, okanye ukusetyenziswa kwezicelo kuncitshisiwe. Kudala, iApple ithathe amanyathelo abalulekileyo kubasebenzisi ukuba baphinde babuyise okwethu, idatha yethu, kwaye siyazi ukuba ngubani oyisebenzisayo, kwaye okona kubaluleke kakhulu, sinika imvume yethu yokuyisebenzisa okanye hayi. Kwaye ngokufika kwe-iOS 14.5, inyathelo elikhulu lithathwa malunga noku, inyathelo abathengisi okanye ezinye iinkampani eziphila ngokuthengisa azithandanga, Kwaye basebenzise idatha yethu ukusinika ukujolisa ngakumbi, okuxabisekileyo kunye nokubiza kakhulu.
Ukusukela i-iOS 6 kukho into ebizwa ngokuba yi-IDFA, ayisiyonto ngaphandle kwesazisi esisetyenziswa ngabathengisi ukusilanda. Xa sigqobhoza i-Intanethi okanye sivula usetyenziso, lonke olo lwazi lunxulunyaniswa nale IDFA, kwaye abathengisi banokufikelela kuyo, besazi ukuba yintoni umdla wethu. Ngale ndlela basinika intengiso eyenzelwe wena, ejolise kwinto esithandayo okomzuzwana, ibhetele kakhulu kunale siyibona kumabonwakude nesiyityeshelayo kuba singenamdla. Ukuba ujonga ibhodi yokuntywila emanzini, kwaye ungene kwiAmazon kwaye ngequbuliso iibhodi zokusefa zivele yonke indawo, kunokwenzeka ukuba uya kuthi ekugqibeleni uyithenge. Kungenxa yoko le nto ukufikelela kule datha kubathengisi kubaluleke kakhulu. I-IDFA yipleyiti yethu yelayisensi, abasiphethe ngayo ngokuqhubekayo, besazi yonke into esiyenzayo.
IOS 14.5 itshintsha yonke into
Ukufika kwe-iOS 14.5 kulitshintsha lonke eli shishini. Ngoku izicelo ziya kufuneka zisibuze imvume yokuba sikwazi ukusilanda, Kwaye siya kuba ngabo abanokuthatha isigqibo ukuba siyafuna ukuvumela ukulandelwa okanye akunjalo. Ukongeza kolu khetho lomntu ngamnye ngesicelo, sinokufikelela kuseto lwesixhobo sethu kwaye sikhethe ukuba akukho sicelo sinokusicela ukuba silulandele, ukuze singabinangxaki nokuba sithi hayi. Kwividiyo ungabona zonke iinketho ngokugqibeleleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 14 » Ungazikhusela njani kwii -apps ekulandeleleni nge-iOS 14.5
Umbuzo omnye, olo khetho kwimenyu lwalufumaneka ixesha elithile. Ngapha koko andikahlaziywa ku-14.5 (ndikwi-14.4.2) kwaye iyavela. Ndikhubazekile kwaye xa ndicofa kwikhonkco «Funda nzulu» ithi abaphuhlisi beeapps banoxanduva lokusebenzisa olu khetho (ndinalo ngesiNgesi kwaye ithi «Abaphuhlisi bohlelo lokusebenza banoxanduva lokuqinisekisa ukuba bayazithobela izigqibo zakho »).
Ke olu tshintsho nge-14.5 kwaye ayisosigqibo sosetyenziso? Enkosi.
Ndiziphendula ngokwam. Ndisandula ukuvuselelwa u-14.5 kwaye ngoku ikhonkco lithi "Xa usala (…) usetyenziso luthintelwe ekufikeleleni kwisiXhobo seNtengiso sezixhobo" esingakhange sitsho ngaphambili, nangona lusaqhubeka ukutsho kamva malunga "nabaphuhlisi be-App banoxanduva lokuqinisekisa ziyahambelana nokukhetha kwakho ».
Thatha ithuba leMacX DVD Superhero Day kwaye uphumelele amabhaso amnandi
Inguqulelo entsha efumanekayo kwiCash Bandicoot: Ekubalekeni!